/Blog/Gallery/I-Synephrine HCL Powder - Ukushiswa kwamafutha kanye Nezithasiselo zokunciphisa umzimba
Posted on 11 / 25 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Namuhla, iphesenti eliphakeme labantu lifuna izinketho zokugcina isisindo esinempilo. Well, phakathi kwabo bonke, ukusetshenziswa I-Synephrine HCL powder kungenye yezindlela eziphephe kunazo zonke ongagcina amafutha angenampilo e-bay. I-Synephrine powder iyinhlangano yamakhemikhali ye-alkaloid engavamile ukuthola. Yinto yemvelo etholakala ezitshalweni ezinjengolintshi obabayo, phakathi kwabanye.
Isakhiwo semolekyulu sikaSynephrine sifana ne-ephedrine, okungenye yezinto ezinkulu ezishisa amafutha. Noma kunjalo, Efdrine ayisekho emakethe njengesengezo sokudla; ngakho-ke, iSynephrine ithathe indawo yayo enhle kunazo zonke. I-Octamine yi-metabolite yeSynephrine futhi kuze kube manje idume ngezindawo zayo ezishisa amafutha.
I-Synephrine iyisishoshovu esibuthakathaka se-alpha-1 ne-alpha-2 adrenoreceptors. Le misebenzi emibili iphendula i-adrenaline yingakho ikhulisa umfutho wegazi kanye nenhliziyo. Ngakho-ke, i-Synephrine 5985-28-4 akunakwenzeka ukuthi ibangele ukwanda kwesilinganiso senhliziyo yakho noma umfutho wegazi.
Lowo ngumehluko omkhulu phakathi kwe-ephedrine ne-Synephrine 5985-28-4, njengoba i-ephedrine yaziwa ukuthi isebenze zombili i-alpha-1 ne-alpha-2 adrenoreceptors.
I-Synephrine HCL futhi ivuselela ama-receptors e-neuromedin U2. Lawa ngama-molecule akhiwe kuyi-hypothalamus futhi akhulisa ukuvela.
I-Synephrine isebenza ngokumisa ukukhiqizwa kwe-eotaxin-1. Yileso molekyuli ekhombisa ama-eosinophils ukuthuthela endaweni eshisiwe. Kuvimbela nomsebenzi we-oxidase we-NADPH, okhiqizwa ngama-neutrophils bese wona udala izinhlobo eziningi ze-oxygen ezisebenzayo.
(1) I-Synephrine HCL yokuLula Isisindo
Amafutha amaningi awona ingozi empilweni, kodwa futhi angakwenza ubukeke kabi. Amafutha avuthayo eza nezinzuzo ezinkulu, kufaka phakathi ukwenza uphile isikhathi eside. Ngenhlanhla, ukusetshenziswa kweSynephrine HCL kungenye yamasu afakazelwe ongawasebenzisa ukunciphisa amafutha omzimba. Nakhu ukuthi kukusiza kanjani ukufeza le nhloso;
Akudingeki ufike ejimini futhi uzizwe ukhathele futhi ulele; I-Synephrine ikutholile. Kusebenza njengophethiloli ngokukuphakela ngawo wonke amandla owadingayo ukuze ube nesikhathi sokusebenza ngokubulala. Amagundane aphathwe nge I-Synephrine powder babonwa bekwazile ukubhukuda isikhathi eside, okukhombisa ukuthi amazinga abo amandla ayesonyukile.
Ngokuthuthukisa amazinga wamandla, iSynephrine yaziwa ukuthuthukisa ukusebenza kwezemidlalo futhi. Umphumela ohlangene wokusetshenziswa kwezindleko zamandla kwamafutha nokukhuthaza kukhuthaza ukusebenza futhi kukhuphula inani lokukhishwa okutholakele kusuka kokuzivocavoca kwe-aerobic ne-anaerobic. Lokho kuyenza ibe isengezo esihle sangaphambi kokusebenza kanye i-fat burner kakhulu.
Leyo yinqubo yokudiliza amafutha emzimbeni. Ichazwa kangcono njenge-metabolism. I-Synephrine isebenza ngokwandisa isilinganiso se-metabolic yomuntu okwenza ukuthi i-burn eyodwa iqale ukushesha. Kuchaza ukuthi kungani ukuthatha i-Synephrine kuzokukwenza ushise amanoni amaningi kusukela lapho imetabolism iphezulu, umzimba wakho uzofinyelela kumafutha agcinwe ukuthola okuningi.
Umthamo we-Synephrine HCL uyahlukahluka ukusuka kumuntu kuya komunye. Noma kunjalo, umthamo ojwayelekile njenge- ukulahlekelwa kwesisindo yi-100mg ngosuku. Kodwa-ke, ucwaningo lukhombisa ukuthi umthamo we-Synephrine HCL we-35mg nawo uyasebenza. The Isilinganiso se-Synephrine HCL akufanele ibe ngaphezu kwe-200mg ngosuku ukugwema ubuthi.
Ngomphumela wokwakha umzimba we-Synephrine noma njengesishisi esinamafutha, kufanele uqiniseke ukuthi uyithatha kuqala into yokuqala imizuzu eyishumi nanhlanu kuya kwengamashumi amathathu ngaphambi kokuzivocavoca. Kunconywa ukuthi ubathathe ngamanzi.
Ngenkathi abanye abantu bengathanda ukuthatha i-Synephrine ngokwayo, abanye bangase bathande ukuyifaka. Ungayisebenzisa ngokuhambisana namanye amandla okunciphisa isisindo kanye nalawo akhulisa amandla akho. UJohimbine ugcwala kahle neSynephrine, ikakhulukazi uma inhloso yakho eyinhloko ukunciphisa umzimba.
Ngaphandle kokungabaza, i-Synephrine HCL yigraff elingcwele lamandla okunciphisa isisindo. Kuyasiza ukucindezela isifiso sakho sokudla uma uhlose ukudla okuncane noma wehlise ukuthatha ukudla okulula okungenampilo. Ungase uthathe isinqumo sokunciphisa isifiso sakho sokudla nge Izindleko ze-Synephrine ihora elingamashumi amabili nane uma ufuna ukungena esimweni ngokushesha.
Uma kusetshenziswe kuhlanganiswa nokudla okunengqondo nokuzivocavoca, uzophawula ukwakhiwa komzimba weSynephrine kanye nomphumela wokunciphisa isisindo kungakapheli amasonto amabili ukusetshenziswa. Kuwo wonke umuntu olwa nokudla, ukudla ngokweqile, noma umuntu ozizwa sengathi ufuna ukukhipha amanye amafutha emizimbeni yabo, lokhu kuyisivumelwano sangempela!
Manje njengoba uzimisele kakhulu ukufeza izinhloso zakho zesisindo, uwutholaphi lo mshisi ononile? Izinkampani eziningi zingakuthembisa ukukunikeza i-Synephrine enhle kakhulu, kufanele uqaphele kakhulu njengoba ezinye zingakuthengisela imikhiqizo engelona iqiniso. Sikunikeza inani lemali yakho ngokunikeza ngezithasiselo zeSynephrine eziphephile futhi ezisebenzayo. Uma nje thenga i-Synephrine kusuka kithi, uyaqinisekiswa ukuthi uzoshisa amanoni ulahlekelwe ngamafutha ngokushesha nangonaphakade.
Izithako zethu zokunciphisa isisindo azinayo ingozi njengoba zingama-100% wemvelo kungabikho okungeziwe okufihliwe. Oda i-'mangaliso 'yokulahleka kwesisindo kusuka kithi namuhla bese ulahlekelwe ngamakhilogremu angafuneki futhi ujabulele izinzuzo zokwakha umzimba zeSynephrine.
Umhlahlandlela WezeMpilo Wezempilo Ukudla Izithasiselo, nguShawn M. Talbott, Kerry Hughes, ikhasi 13
I-aprepitant powder esetshenziselwa ukucabangela kokuphuza ngemuva nokuhlanza
Ama-Nootropics aphezulu we-7 (i-Smart Drugs) emakethe ye-2018
I-Gestodene powder (i-60282-87-3)